တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကဗျာ ... ကာရန်နှင့် .. ကျမ
Posted by မေဓာဝီ at 1:20 PM
ဆောင်းညအတွေးကဗျာ အတွက်ရော ၊ ဆုတောင်းအတွက်ရော၊ ဒီအခုတင်ပြထားပေးတဲ့ကဗျာအတွက်ရော ကျေးဇူးတွေ အများကြီးတင်ပါတယ်။
ရင်ထဲကလာရင် ကဗျာပဲလို့ ဟနကတော့ ကပ်သပ်ပြောတတ်တယ်။
မမေရေးတာ ရင်ထဲကလာတာမို့ ကဗျာပဲပေ့ါနော်..ဟန လက်သုံးစကားနဲ့ဆိုရင်လေ
12/27/2006 4:04 PM
ကွန်မရေးဖြစ်တာကြာလို့ အခုမှ အကြွေးလာဆပ်တာ။ :P
တကယ်တော့ ကျနော်လဲ ကာရန်မဲ့မှ ကဗျာ၊ ကာရန်ရှိမှ ကဗျာရယ်လို့ ဆိုတာမျိုး ပြောတာကို လက်ခံကြည့်လို့မရတာပါ။ အခု အမတင်ထားတဲ့ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ ကာရန်မဲ့ ကဗျာကိုက ဒါဟာလဲ ကဗျာကောင်းပါလားဆိုတာကို ပြနေတာပဲလေ။ အဲဒီတော့ အမရဲ့ အောက်ဆုံးက စာပိုဒ်ကို ကျနော် ကော်ပီကူးချမယ်ဗျာ။ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ တရားစွဲလဲ မတတ်နိုင် :P..
ကျနော်… ကဗျာ မစပ်တတ်ပါ။
ကျနော်… ကဗျာ ဆရာ မဟုတ်ပါ။
ကာရန်ရှိ ကာရန်မဲ့ကိုလဲ သေချာစွာ နားလည်တတ်ကျွမ်းခြင်း မရှိသေးပါ။ (ရှိလာမယ်လဲ မထင်)
ကျနော် … ကာရန်ရှိ၊ ကာရန်မဲ့ ကဗျာများ အားလုံးကို ခံစား ဖတ်ရှုပါသည်။
12/28/2006 12:19 AM
Ya.. That isagood one indeed..
My point is that if someone writesapoem oraparagraph whatever should be inacertain standard...
As the author like Sayagyi Min Thu Won.He is the man who madeagreat job, whatever he writes it is of use to all isn't it ? the knowledge...the format of his writing, the taste was given form his writing is priceless …etc...
I mean ..apoem is the essence of the literature.. Not every one can writeapoem, you guys admit it.
We all know that it is an art.
In addition, if we follow the rules of poem...it would be better, wouldn't it.
It is up to you guys, every one is indifferent, if the diversity among us can be exchange or share, to built the better standard of our Burmese Literature.
You have own right to think, inspire, invent or innovative mind ... that will help us the better and good standard Literature….
Into my perspective, I want our Burmese Literature toalevel…. No intention to argue about which one is better among modern, post modern and the conventional style of writing. What do you think..